I-Roses futhi iphakamisa ukunakekelwa kwabaqalayo - ulwazi lokulima
Isikhathi sokutshala sekwindla
Rose uthathe emva kwesikhathi seqhwa
Ukulawulwa kwezinambuzane eziphilayo nezinambuzane ezimibalabala nge-roses
Kunezitshalo ezimbalwa kuphela ezitholakala ezinhlobonhlobo ezinhlobonhlobo zezinhlobonhlobo, njenge "indlovukazi yezimbali", i-rose. Izinhlobo ezivame kakhulu zama-roses zensimu yasendlini yizihlahla ezincane noma ezincane ezikhuphukela phezulu kumitha.
Rose ukunakekela Abaqalayo - kulula kakhulu ukunakekelwa roses
Lapha, umehluko wenziwa phakathi kwezinhlobonhlobo nama-racemes noma ama-inflorescences alabo abakha imbali eyodwa kuphela ekudubula ngamunye. Yikuphi okuhlukile futhi umbala owukhethayo ikakhulukazi yindaba yokunambitha.
I-Roses ensimini yase-rose
Okubalulekile, iningi lalezi zimbali ezinhle likhetha indawo enelanga. Lokhu kusebenza nasezintabeni ezikhuphuka, ongazihlobisa udonga lwendlu noma ngisho ne-trellis kahle.
Iphutha mayelana nokunakekelwa kwe-rose
Ngokuphambene nemibono evamile yokuthi i-roses inakekelwa kakhulu, kulula kakhulu ukunakekela. Lokhu kuyiqiniso okungenani kubalimi bokuzilibazisa abafuna ukujabulela izimbali ezinhle nokukhula okuluhlaza. Kubalimi, yebo, kubonakala kuhlukile.
Uma ufuna ukuba nomsebenzi omncane ngangokunokwenzeka ne "indlovukazi yezimbali", khetha izinhlobo ezibandayo zasebusika ensimini yakho. Ama-roses amahle abomvu avame ukuzwela ku-frost, okuyiqiniso ikakhulukazi ezinhlobonhlobo ze-English.
Isikhathi esihle sokutshala ama-roses ngwindla. Uma ufuna ukujabulela izimbali zakho isikhathi eside, kufanele uzithenge emanzini aqokiwe, mhlawumbe ngaphandle kwembiza. Ngaphambi kokuba uwabeke emhlabathini, inhlabathi kufanele ilungiselelwe kahle.
Kubaluleke kakhulu ukukhulula isizathu ngokujulile ngoba ama-roses adala izimpande eside. Lesi simo sizozuzisa kamuva, ngoba akudingeki ukuba manzi izitshalo kaningi ngisho nasehlobo olumile.
Kufanele ucele ama-roses ekwindla hhayi, Lokho okwenza amahlumela amancane kungabanda ebusika futhi kukhuthaze ukulimala kwesithwathwa kulesi sitshalo.
Emva kokutshala sekuwanele ukucwilisa inhlabathi kancane futhi amanzi kahle. Ngesikhathi sasebusika eduze kwekhoneni, i-roses ebusika eqinile kufanele ivikelwe kusuka eqandeni elisindayo. Lapha, nokho, kwanele ukumboza inhlabathi ezungeze isiqu ngamagqabhagqabha noma amagatsha ama-fir, cishe amasentimitha ayishumi aphezulu.
Ikhulelwa kuphela entwasahlobo. Imikhiqizo ye-Organic iyakulungele ukufakwa emhlabathini oseduze naleso sitshalo
Ngaphambilini, ama-roses adinga ukunqunywa kwonyaka, kodwa kuphela lapho ubusika ekugcineni sekuphelile. Kubalulekile ukususa wonke amahlumela omisiwe namapulangwe.
Ngaphezu kwalokho, isiqu ngasinye kufanele sifushane ukuze emhlabathini "amehlo" amabili kuphela, okungukuthi ukuqina okuvela kuwo amagatsha amasha, kubonakala.
Akusho ngaphandle kokuthi ukusika izihlahla ezibukhali nokuhle kudingekile ukuze kutholakale izindawo ezinqunyelwe ukusika. Ngaphandle kwalokho isikhunta nezinye izinambuzane zingatholakala lapha.
Ehlobo ungakwazi ukujabulela izimbali cishe okungenamkhawulo. Uma kunesidingo, ungaphinda ukhule kuze kufike ngo-Juni futhi mhlawumbe uthele ngezikhathi ezithile, kodwa sicela ungabi ntambama futhi kusuka phezulu!
Amaconsi amanzi emifuleni nasemaqabunga ebangeni angabangela ukushisa okungaqondakali esitshalweni.
Futhi labo abesaba izinambuzane zezitshalo basanda nje ukutshala i-lavender endaweni eseduze: akugcini nje ukuthengisa ama-aphid ngephunga layo, kodwa futhi ubeka ama-accents aseMedithera.
Ulahlekelwe ulwazi, ufuna isihloko esithile? Khuluma nathi.
I-Garden Ideas - Ukufakela nge-roses
Ikhasi lokubala lomuntu omdala i-roses bouquet
IJalimane - izitshalo zokuklama nokuzilibazisa